Gudoomiye aadan madoobe oo Durbaba ka horyimid Qorshe uu Xasan shiikh Watay(Xog) - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized WARARKA MAANTA Gudoomiye aadan madoobe oo Durbaba ka horyimid Qorshe uu Xasan shiikh Watay(Xog)
Gudoomiye aadan madoobe oo Durbaba ka horyimid Qorshe uu Xasan shiikh Watay(Xog)
Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) ayaa ka digay heshiisyo caalami ah oo ay dowladda la gasho dowlado kale oo aan baarlamaanka la soo marsiinin.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa digniintan soo saaray, xilli haatan la hadal hayo heshiiska qaadka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, oo Nairobi ay sheegtay in dhowaan la saxiixayo.
Aadan Madoobe, oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da, ayaa sheegay in marka hore ay xukuumadda soo gasho heshiisyada caalamiga ah ka dibna baarlamaanka loo soo gudbiyo si ay u ansixiyaan.
“Marka ay xukuumadda ay soo gasho heshiis caalami ah baarlamaanka ayay u soo gudbineysaa oo ansixinaya, wax ka baddalaya amaba diidaya,” ayuu yiri Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe).
Aadan Madoobe oo wax laga weydiiyey waxa uga qorsheeysan heshiiska qaadka ee lagu wado in 5-ta bisha July lagu saxiixo magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa yiriu
“Arrimaha diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya waa inaga horreyeen oo sida lagu kalatagay ma naqaan sidaa darteed dib u eegis ayaan ku sameyn doonnaa oo hadda kuma degdegyno laakin mabdi’iyan waxaan kuu sheegeyaa haddii heshiis caalami la galo waa in baarlamanka uu ansixiyaa.”
“5-ta bisha Luulyo ee soo socota, heshiiska waxaa lagu saxiixi doonaa halkan Nairobi,” ayuu yiri Munya xilli lagu gudajiray ololaha doorashada Kenya ee lagu inay dhacdo bilowga bisha August.
Previous articleMuuse Biixi oo loo bandhigay naqshad casri ah oo loo dhisayo Suuqa Waaheen (Sawirro)
Next articleMaalqabeenka adduunka oo ay gabadhiisa xiriirka u jatay.